विचार « Etajakhabar
विश्वलाई स्तब्ध पारेको त्यो घटना, जो आज सम्म जिवितै भएको महसुस गर्छन्
पाकिस्तान, धर्मको नाममा विभाजित यस्तो देश जहाँ महिलाहरू आज पनि अधिकारको ल’डाइँ ल’डि’रहेका छन् । महिलाहरूलाई पुरुषको समान अधिकार आज पनि छैन । यस्तो परिस्थितिमा त्यो क्षमताको कल्पना गर्न सकिन्छ,
यसरि म बाँच्न सकिन भन्दै दिपकले लेखे प्रधानमन्त्रीलाइ इच्छामृत्युको कानुन बनाउन पत्र
म्याग्दे गाउँपालिका-७,तनहुँका दीपक भण्डारीले मुडोजस्तै ओछ्यानमा पल्टिएर जीवन का’ट्न थालेको १२ वर्ष बितिसकेको छ। उहाँ २०६६ सालमा सडक दुर्घटनामा परेपछि उनको अवस्था बिग्रिएको हो। उक्त घटना पछि त्यसयता उनको टाउको
आज मैले बाँच्ने आशा मारिसकेकी थिएँ । मृत्युलाई यति नजिकबाट यसअघि कहिल्यै नियालेको थिइनँ ।’ गत बिहीबार इन्जिन फेलपछि बुद्ध एयरमा सवार सञ्चारकर्मी शकु शाहले दिएको बयान हो यो ।
विवाहमा यस्तो निम्तो कार्ड आयो, सबैले यसरी सजाएर राखे (नमूना हेर्नुस्)
काठमाडौ । विवाहको सिजन सुरु भए लगत्तै तपाईको घरमा निम्ता कार्डको चाङ लाग्छ । ति निम्ता कार्ड तपाई के गर्नुहुन्छ ? पक्कै पनि विवाहको निम्ता मानेपछि कार्ड फाल्नुहुन्छ होला ।
ए डिभिजन लिग जित्ने चार टोलीको दाबी, के के भन्छन् कप्तान र प्रशिक्षक ?
काठमाडौं : नेपालको शीर्ष डिभिजन लिग भोलि (शुक्रबार) बाट सुरू हुँदै छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आयोजनामा हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा १४ क्लबको सहभागीता रहनेछ
काठमाडौं : रुद्राक्ष विशेष किसिमको वृक्षको दाना हो । साधारणतया, यो पहाडी क्षेत्रहरूको निश्चित उचाइमा वा हिमालयमा पाइन्छ । अचेल नेपाल, बर्मा, थाइल्यान्ड र इन्डोनेशियामा रुद्राक्षको वृक्ष पाइन्छन् । दक्षिण
–ब्रह्मश्री मित्र – कुनै विषयको दार्शनिक पक्ष र वैज्ञानिक पक्ष आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, व्यवहारिक पक्षमा सुक्ष्मभन्दा सुक्ष्म कुरालाई कसरी बुझ्ने? कसरी अनुभूत गर्ने? भन्ने नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो।
–ब्रह्मश्री मित्र : अध्यात्मको चर्चा गर्दा, आत्मा–परमात्माको चर्चा गर्दा, अस्तित्वको चर्चा गर्दा अनि मौनताको चर्चा गर्दा हामीले जुन शब्दहरु प्रयोग गर्छौ, आखिर ती सबै शब्दहरु अत्यन्तै कमजोर सावित हुन्छन्। मौनको
न्यूयोर्क । तपाईंलाई लाग्ला, राष्ट्रको उच्च ओहोदामा रहेकाको परिवारको जीवन सुखी र भव्य हुन्छ । तर, त्यस्तो होइन । केही यस्ता अपवाद हुन्छन् जसले राजनीति व्यापार होइन, सेवा हो भन्ने